SNM ” Sool ayaan qabsanaynaa” | allsanaag
SNM ” Sool ayaan qabsanaynaa”
Maleeshiyaad SNM ah oo Sool ku soo duulay iyo Karaash oo weli taliyihii la bedelay la xanaaqsan
Maxaa isku soo aadiyey Dulaanka SNM iyo dhaq dhaqaaqa Axmed Karaash oo hadda Bulshada reer Puntland ku kala qaybsameen,
Siyaasadda Madaxweyne Farmaajo iyo Saaxiibkiis hogaamiyaha Itoobiya Abby Axmed. ayaa sida la sheegay heshiis ku ah in marka hore la xaliyo dhulkii laysku oran jiray British Somaliland, si taas u suurto gashona waa in Maleeshiyaadka SNM gacanta ku wada dhigaan gobolada Sool iyo SANAAG
Maanta maleeshiyadkii Isaaq, dhaqdhaqaaqii ugu weynaa ayeey ka wadaan gobolka Sool, halka madaxweyne ku xigeenkii Puntland Axmed Karaash, uu isga ka bilaabay Garowe khilaaf shaki ku jiro oo ah in Farmaajo ka dhex guuxayo.
Sida ilo aad lagu kalsoon yahay laga soo xigtay ayaa sheegaya in Farmaajo, Abby iyo Biixi ay isku afgarteen a in Beelaha Dhulbahante iyo Warsangeli la nacsiiyo beesha Majeerteen, Lagana shaqeeyo. Lama caday, in Axmed Karaash ka mid ayahay kooxda loo isticmaalayo in laysku dhufto beelaha Harti.
Dhowaan Farmajo iyo Biixi waxay ku kulmeen qol ku yaala xafiiska Raisulwasaaraha Itoobiya, lama oga waxay ku wada hadleen, Sida Qaramada midoobey hadda sheegatyan labada Hogaamiye waa wada xiriiraan , waana is jecel yihiin
← Metalaada Gobolka Banaadir ee Aqalka Sare Xagee ku Dhexjiraan? Gudoomiyaha Nabad iyo Nolol →
1 thought on “SNM ” Sool ayaan qabsanaynaa””
Oday June 2, 2020 at 01:57
Farmaaho iyo hogaamiyaha beelaha dirta woqooyi wixii ay ka wada hadleen lama garan karo, lkn waxan farmaajo iyo aby ahmed ka maqalnay inay ahayd booqasho farmaajo hargeysa ku aado, in layska qiyaaso waa laga fiican yahay. Dacwada ay had iyo jeer ku dacwoodaan reer Sool, oo ah in farmaajo gonolka ku darayo snm waa wax lagu qoslo waayo gobolka hada yaa haysta oo maamula. Mida kale marka farmaajo lagu eedeynayo Sool buu isaaq siinayaa, xagee lagu ilaaway calooshooda u shaqeystayaasha kumaankunka ah oo beesha sool ka soo jeeda oo caalamka iyo soomaalidaba duhur kasta u sheega inay soomaalidiid yihiin oo snm la shaqeystaan.
Dadka Sool deggan iyagaa caan ku ah hunguri iyo inay u adeegaan koox kale oo aan dantooda aqoon